Amafomula esihloko seposi andisa iTraffic
The New Ultimate Secret How To Top 10 Umhlahlandlela
NgeSonto, ngoJulayi 18, i-2010 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Izihloko zingenye yezingcezu zokuqukethwe ezingabhekiwe kakhulu kubhulogi yakho noma kuwebhusayithi. Isigaba ngasinye owake wasibhala sikutshele ukuthi isihloko esihle sifingqa indaba. Kuwebhu, akuyona into efanayo. Bengingabhala lesi sihloko njenge- “Writing Post Titles”… akekho obengachofoza kuso.
Into eyodwa ozoyithola ifana nababhali bamakhophi abangochwepheshe kuwebhu ukuthi basebenzisa ifomula efanayo ngaso sonke isikhathi ukuheha ithrafikhi. Isihloko sami seposi siyahlekisa… kepha iqiniso ukuthi lawa masu ayasebenza. Nazi izinhlobo eziyishumi zezihloko zokuthunyelwe ezizokhuthaza abagibeli bezindiza ukuba bacindezele kokuthunyelwe kwakho.
Kanjani… Okuningi, okungcono, okusheshayo - usebenzisa indlela yokuhlangana nomphumela omuhle.
Uhlu oluphezulu olungu-5, 10, 100 - Akuningi kakhulu… ngaphandle uma uzama ukwenza iphuzu elikhulu. Abafundi bathanda uhlu.
Umbuzo? Phendula - Buza umbuzo obuzwa yiwo wonke umuntu bese usho impendulo.
Okumangazayo, Okubalulekile, Okugcina, Surefire - Sebenzisa amagama avusa umuzwa onamandla wokuthi ulwazi oluhle kakhulu umuntu angaluthola noma kuphi.
Mahhala - Yup, abantu basathanda isivumelwano samahhala.
Yini Engcono Kakhulu, Edumile, Ecebile Eyazi - Ufuna ukwazi ukuthi bazi ini, angithi?
Umhlahlandlela Wemfihlo, Ifomula - Uma kuyimfihlo, ilukuluku lethu liyasizuzisa.
Kuyashesha, Kuyashesha, Kusesikhathini - Asinaso isikhathi esiningi kulezi zinsuku, sebenzisa amagama asetha okulindelwe ukuthi imininingwane ingagcinwa ngokushesha.
Izinombolo Ezinkulu, Amaphesenti Amakhulu - Abafundi bakhangwa yizinombolo ezinkulu.
Nqoba, Nqoba, Win - Abantu bayakuzonda ukulahlekelwa. Babonise ukuthi bangakugwema kanjani!
Ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha (SERP), uhlangane ne- isihloko nencazelo - yilokho kuphela! Lezo yizinto ezimbili kuphela ezibonwa ngumfundi ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuchofoza noma cha ukuvakashela isayithi lakho. Isihloko sithathwe kweyakho isihloko sekhasi isici. Uma ubhala okuthunyelwe kwebhulogi, lokho kuvamise ukuhambisana nesihloko seposi lakho leposi. Incazelo yakho ingathathwa kokuqukethwe kwekhasi, kepha uma une- umaki wencazelo yemeta, izinjini zokusesha zivame ukuthatha lokho okuqukethwe esikhundleni salokho.
Ingabe uchofoze kuso? Ngiyazi ukuthi uyafuna!
Uma ubheka kuwebhu yonkana kuma-athikili athola ukunakwa okukhulu, lezi zihloko eziphoqayo zihlala phezulu kuzo. Muva nje ngicubungulele iklayenti ezihlokweni zamakhasi alo uma kuqhathaniswa nalabo abancintisana nabo - futhi sathola ukuthi empeleni babekleliswe kahle kakhulu uma kuqhathaniswa nabancintisana nabo kodwa amazinga abo okuchofoza (CTR) ayephansi.
Ukusetshenziswa ngempumelelo kwamagama angukhiye nezihloko zeposi eziphoqelelayo kungaba nomthelela omkhulu kuthrafikhi yakho. Chitha isikhathi esiningi ubhala isihloko sakho seposi njengokuqukethwe uqobo!
I-Winning Combo Yomkhiqizo, Ukukhetha, Nemizwelo
Ngini i-SEO Worth $ 100 Million?
Jul 19, 2010 ku-7: 03 AM
"Ifomula lamahhala elimangalisayo lembula izimfihlo eziphezulu eziyi-10 Abantu Abadumile Abalisebenzisayo Ukukhiqiza Izinombolo Ezinkulu Bese Bawina Ngokushesha"
Jul 20, 2010 ku-9: 42 AM
KODWA WAZA, KUNOKWENGEZIWE! Thatha umthetho MANJE bese uthola ikhophi yesibili yokubhuloga kwebhizinisi lama-Dummies MAHHALA - vele ukhokhele ukuthunyelwa nokulungiswa nokuphathwa kwe- $ 16.49 kuphela!
Futhi-ke i-upsell yakho yokuqala ukuThengiswa kwe-Twitter kwamaDummies kulandelwa isaphulelo esingu-20% kwithikithi lakho le-Blog Indiana!